Safiirla Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo la kulmay Soomalida Mareykanka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaSafiirla Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo la kulmay Soomalida Mareykanka
Safiirla Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo la kulmay Soomalida Mareykanka
03/11/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Safiirka cusub ee uu Mareykanka dhowaan usoo magacaabay dalka Soomaaliya ayaa la kulmay Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kulankan oo ay ujeedadiisa aheyd horumarinta xiriirka safiirka iyo bulshada Soomaalida.
Safiirka uu dhowaan ansixiyay Kongareeska Mareykanka ee lagu magacaabo Donald Yamamoto ayaa bilaabay in uu Soomaalida degan Minnesota kala tashado arrimaha Soomaaliya.
War ay soo saareen howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safiirka uu la kulmay arday Soomaaliya oo wax ka dhigata jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka iyo qaar kamid ah bulshada Soomaalida ee Minnesota.
Sida warbixintaba lagu cadeeyay safiirka cusub waxa uu doonayaa in uu la falgalo dhalinyarada Soomaaliyeed isaga oo u mari doona baraha bulshada.
Safiirka cusub ee dhowaan Mareykanka usoo magacaabay Soomaaliya Donald Yamamoto oo horay usoo ahaa safiirkii Mareykanka ee Itoobiya iyo Jabuuti ayaa lagu bedelay safiirkii hore Mareykanka ee Soomaaliya Steven Michael Schwartz oo ka shaqeynayay Soomaaliya illaa bishii 2016-kii.
Aqalka sare ee Mareykanka ayaa 11-kii bishan ansixiyay Donald Yamamoto in uu noqdo safiirka cusub ee Mareykanka u fadhiyi doona Soomaaliya.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo ka doodaya tiirka siyaasiyiinta